तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यी खानेकुरा – Sandesh Munch
यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ । जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियमलगायत कमी हुन जान्छ । यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ ।
त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएमा यस्ता खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन स्
Prevमहिनावारी हुँदा सहन नसक्ने गरि तल्लो पेट दुखे के गर्ने ? समस्या र घरेलु उपाए
Nextज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीले गरे कोरोनाको भविष्यवाणी | नेपालमा कहिलेसम्म यस्तो महामारी ?
यीदश सपनादेखे तपाईलाई अकस्मात धनलाभ हुन्छ
एैना हेरेर यो एक शब्द बोल्नुहोस जिन्दगी बदलिन्छ
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84121)